Beta 5 ee macOS 11.3 wuxuu ku qariyaa iMac processor-ka M1 | Waxaan ka socdaa mac
Beta 5 ee macOS 11.3 wuxuu ku qariyaa iMac processor-ka M1
Noocyada beta badanaa waa horudhaca dhowr sheeko oo ku saabsan qalabka Apple waana taas in shirkaddu ku muujineyso koodhka ilaha tilmaamaha qalabkeeda mustaqbalka. Xaaladdan oo kale, wax aan wada sugeyno waa imaatinka processor-ka M1 dhammaan kombiyuutarada Mac, iyo tixraacyada iMac ayaa lagu muujiyay koodhka beta-kii ugu dambeeyay ee shalay la sii daayay.
Laga soo bilaabo shabakadda 9to5mac muujinaya laba nambar oo cusub oo iMac ah oo aan waligood horay loo arag, iMac 21,1 iyo iMac 21,2. Xeerarkan laga dhex helay koodhka nidaamka qalliinka waxay bixiyaan tilmaan cusub oo ku saabsan imaatinka processor-radan M1 ee iMac.
Bilaabistoodu waqti dheer qaadan mayso, waana taas waxa ay shirkadda Cupertino doonayso inay tahay in dhammaan qalabka lagu wareejiyo hawl-wadeenadooda sida ugu dhakhsaha badan. Markaa waxaan arki lahayn isbeddelka naqshadeynta in yar, wax aan maanta umuuqan inay mudnaan siinayaan.
IMac badanaa wuxuu ku yimaadaa dhamaadka sanadka si joogto ah laakiin cusbooneysiin hore looma diidin in lagu daro kuwan wax soo saarayaasha ah. Natiijada marka la eego isku halaynta, isticmaalka iyo awoodda M1-kan hadda way ka badan tahay inta la xaqiijiyay iyo Shaki nagagama jiro in kala-guurka uu ku dhici doono sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ahSidaa darteed, xitaa ma sugi karaan muddadaas dheer si ay u cusbooneysiiyaan iMac oo ay uga baxaan isbeddelka naqshadeynta hadhow.
Waxaas oo dhan oo ku saabsan naqshadeynta waa wax Apple kaliya ogtahay, waxay noqon doontaa waqtigii la arki lahaa isbeddelka xanta iyo wixii ka sarreeya sug Apple inuu go'aansado inuu ku boodboodo M1-ka iMac-kiisa ku darista ama maya beddelka naqshadda kuwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » iMac » Beta 5 ee macOS 11.3 wuxuu ku qariyaa iMac processor-ka M1
Addoonku wuxuu lahaan doonaa xilli saddexaad oo laga yaabee in ka badan